Manana mpitarika vaovao ny fiteny Arabo, Shinoa, Danoà, Frantsay ary Okrainiana ato amin’ny Global Voices! · Global Voices teny Malagasy
Manana mpitarika vaovao ny fiteny Arabo, Shinoa, Danoà, Frantsay ary Okrainiana ato amin'ny Global Voices!
Voadika ny 01 Janoary 2022 17:12 GMT
Fahafinaretana ho ahy no manambara fa manana Mpitantana Fandikanteny vaovao ireto tranonkala Lingua manaraka ireto: Danoà, Frantsay, Shinoa nentin-drazana, ary Okrainiana. Miangavy mba arahabao: Ina Melgaard, Juliette, Yanne C, ary Volodymyr Tyravskyi. (Fanamarihana mpandika teny malagasy: Jereo ao amin'ny fiteny anglisy ny sarin-dry zareo raha liana amin'izany ianao)
Mpianatra efa nahazo diplaoma ambony ary 30 taona Ina, mandika avy amin'ny teny espaniola ho amin'ny teny danoà, monina ao Danimarka. Nonina fotoana maharitra imbetsaka tany Espaina Ina, izay nahatonga azy ho liana amin'ilay fiteny. Amin'izao fotoana izao izy mianatra hahazo Master of Arts (MA) amin'ny Fifandraisana Fihariana Iraisampirenena amin'ny teny espaniola, ary amin'ny fahavaratra (ilabolantany avaratra) ny fanadinana farany amin'izany. Amin'ny ankapobeny ny mahaliana an'Ina dia politika, kolontsaina ary zon'olombelona.
Mpandika teny an-tsoratra sy ambava sady za-draharaha amin'izany amin'ny lohahevitra samihafa ho an'ny fikambanana maro i Fidèle Juliette, na Juliette fotsiny izao, monina ao Kamerona. Manana diplaoma master anankitelo amin'ny fandikanteny am-bava amin'ny fivoriambe, dika an-tsoratra, ary teny anglisy izy. Zohio izy ao amin'ny Facebook sy LinkedIn!
Mpanao gazety menavazana za-draharaha amin'ny gazety, gazetiboky ary famoahana anjotra i Volodymyr, monina ao Okraina, ary mandika teny avy amin'ny teny anglisy, alemà ary pôlôney. Zohio izy ao amin'ny Facebook, LinkedIn, ary ao amin'ny fantsona Youtube!
Nanatevin-daharana ny GV amin'ny maha-mpandray anjara azy amin'ny Lingua Shinoa tamin'ny taona 2013 i Yanne, monina ao Taipei, Taiwan, ary samy tatazany na ny Lingua na ny RV amin'ny maha-mpandrindra Lingua sy mpandrindra ny taratasim-baovao RV azy. Manana diplaoma doktorà amin'ny fahasalamana ara-tsaina i Yanne.
Ary farany, hanatevin-daharana ny fitantanana ny Ligua Arabo eo ankilan'i Rami AlHames sy Mariam AbuAdas aho.